म्याग्देकी कान्छी जनप्रतिनिधि अनु – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun म्याग्देकी कान्छी जनप्रतिनिधि अनु – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १२:१८
दमौलीः तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा सबैभन्दा कान्छी जनप्रतिनिधिको रूपमा अनु महत श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छन् ।
वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम सम्पन्न हुँदा म्याग्दे ६ कि २३ बर्षिय अनु वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
अखिल नेपाल महिला संघ म्याग्दे ६ को सचिव समेत रहेकी अनुलाइ सानै उमेरमा जनप्रतिनिधि बन्न पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ? भनी दमौली न्युजले सोध्दा निकै उत्साहित देखिन्थिन् ।
राजनीतिक अनुभव लिन अग्रजहरूबाट सिक्न र जनताको काम कसरी छिटोछरितो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफ्नो ध्यान जाने उनले बताइन् । ‘७१३ मत ल्याइ एमालेको तर्फबाट जितेको हुँ, जबकी यो वडामा वडा अध्यक्ष सहित अरु सबै पद काङ्ग्रेस उमेदवारले जित्नुभएको थियो,’ अनुले भनिन् ।
अझै रोचक त के छ भने यहि वडामा काङ्ग्रेस बाट जितेका सबैभन्दा ज्येष्ठ वडा सदस्यमा जुक्तराज वाग्ले रहेका छन् । अनुको प्रतिस्पर्धी भेषकुमारी थापाले ६५५ मत पाएकी थिइन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १२:१८ 148 Viewed